PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - KUZE KWASA ZIBUYA EMCIMBINI KADJ BONGS
KUZE KWASA ZIBUYA EMCIMBINI KADJ BONGS
UGCINE usuvalwa ngamaphoyisa umcimbi omkhulukazi kaDj Bongs obukwaNdengezi ngoMgqibelo ebusuku. Isikhathi obekuvunyelwene ngaso bese sishaye sadlula amaphoyisa aphoqeleka ukuba awuvale umcimbi ababukeli besathamele idili lomculo wabaculi abadumile kuleli.
Bekusanda kudlala uDj Maphorisa esteji nalapho ehlanyise izinkumbi zabantu ebeziphume ngobuningi bazo zizothamela umcimbi obizwa ngeDj Bongs Social Link obuse zinkundleni zemidlalo KwaNdengezi.
Ukaputeni wamaphoyisa, ongathandanga ukudalula igama lakhe ukhale ngabaculi abahamba bejahe imicimbi ekude bese befika emuva kwesikhathi kweminye.
“Ngeke sidlale abaculi abanye abasuke beyokwenza izizumbulu zemali kweminye imisebenzi bese befika emuva kwesikhathi kweminye, sekumele sihlale thina silinde bona.
“Siyakuphoqa ukuba uvalwe lo mcimbi manje usuphelelwe yisikhathi obekuvunyelwene ngaso,” kusho uKaputeni ngo-04h15, ekuseni ngeSonto.
UDj Bongs uthe kumjabulisile kakhulu ukubona abantu bephume ngobuningi babo ikakhulukazi abaselokishini kanye nabaxhasi bakhe abamsizile ukuthi lo mcimbi ube yimpumelelo.”
“Ngibonga bonke abantu base West abaphume ngobuningi babo yize noma sisabhekene nezingqinamba zokuba nendawo yokupaka izimoto njengoba kuba nesiminyaminya uma kukhona lo mcimbi.
“Kuningi okuhle engingabe ngiyakwenza kodwa ngenxa yokungabi bikho kahle kwezezimali ngigcina ngingakwenzi. Kunezingane eziphasa kahle ezikoleni kufanele ngabe ngiyazifundisa kodwa akwenzeki ngenxa yokushoda ngemali. “kusho uDj Bongs
UMapintsha uhlanyise izihlwele ebezigcwele inkundla ngengoma yakhe ethi “Phakamisa” asanda kuyikhipha. Abantu bebebonakala bejabulile bedansa behamba phansi abanye baze bakhumula izikibha ngenxa yobumnandi. Yize kube nokuphazamiseka kwe- sound ngesikhathi sekuzodlala uDj Maphorisa.
Umculi osafufusa uPrecious Hlatshwayo (20) ofunda Elangeni TVET College, waseClermont we- nze ezibukwayo esiteji egila izimanga ngenoni lakhe leGqom elihambisana nomdanso.
Uhlelo beluphethwe uTha “Nontandakubukwa”Simelane owenze okungajwayelekile efika neCD yakhe ebinezingoma ezimbili ezithi “Asimbonanga uMandela” kanye nethi “Sister Bettina" abantu bazijabulele kakhulu bazicula kanye naye.
UMAPINTSHA uhlanyise izihlwele kwiDj Bongs Social Link, KwaNdengezi ngengoma yakhe ethi “Phakamisa” asanda kuyikhipha.
IZITHOMBE NGU: SENZOKUHLE VUMASE
IQEMBU i-Dbn Nyts linandisa emcimbini kaBongs obusezinkundleni zemidlalo KwaNdengezi.